Yusuf Garaad: Ila soo dhowee Cawad, Wasiirka Cusub ee W. A. D.
27 Sano markii ugu horreysay een Xil Wasaaradeed wareejiyo
Waxaa sharaf ii ah oo aan ku faraxsan ahay in aan maanta xilka Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo ISkaashiga Caalamiga ah aan ku wareejiyo Wasiirka cusub, Axmed Ciise Cawad oo inta aan la magacaabin ahaa Danjiraha Soomaaliya ee Washington.
Wasiir Axmed oo ah nin aan hore u soo wadashaqeynay annaga oo laba Danjire ah waa nin xog ogaal u ah Wasaaradda siiba xaaladda ay Safaaradaheennu ku sugan yihiin.
Waxaan u mahadcelinayaa sida uu ii sharfay iyo qaddarinta uu ii muujiyay. Waxaanan u rajeynayaa in uu Allah ku guuleeyo xilka ka sii culus kii uu hore u hayay ee uu Qaranka maanta u qaaday.
Wasiirka iyo Wasaaraddaba waxaan ku taageeri doonaa wax Allah wixii karti iyo aqoon igu jira, welibana waxaan hadda u madax bannaan ahay in aan cod kore ugu qeyliyo haddii ay dhacdo in Wasiirka kaalintiisa dastuuriga ah iyo maqaamka uu Dowladda ku leeyahay la isku dayo in la wiiqo.
Laba Danjire oo isku wareejiyay xilka Wasaaradda
Sawirku waa mid aan Safaaraddeenna Washington ku galnay 2016 aniga iyo Axmed Ciise Cawad mar aan ahayn laba Danjire. Axmed wuxuu fadhiyay caasimadda Mareykanka ee Washington aniguna waxaan fadhiyay Xarunta Qarammada Midoobay ee New York.
Waxaan u mahadcelinayaa Wasiiru Dowlaha Wasaaradda, Wasiir ku Xigeenka iyo dhammaan madaxda, diblomaasiyiinta, shaqaalaha iyo marti sharaftii ka qeyb gashay munaasabadda.
Wasaaradda iyo howlwadeennadeeda waxaan u rajeynayaa guul aad uga sarreysa inta ay hadda mareyso.
Ugu dambeyn wxaan u mahadcelinayaa Ra'iisal Wasaare ku xigeenka iyo Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra'iisal Wasaaraha oo iyagu nagala soo qeyb galay munaasabadda xil wareejinta oo ahayd markii ugu horreysay 27 sano ee xil Wasaaradeed aan wareejiyo.
Posted by Yusuf Garaad at 15:12:00